တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံတွင် အင်တာနက် ဆင်ဆာလုပ်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံတွင် အင်တာနက် ဆင်ဆာလုပ်ခြင်း
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် အင်တာနက်ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းကို ဥပဒေနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းပေါင်းများစွာအရ ဆောင်ရွက်သည်။ ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းက လိုက်နာသော တိကျသည့် ဥပဒေများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်များ မရှိပါ။ ထိုဥပဒေများအရ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ(PRC) အစိုးရက ခြောက်ဆယ်ထက်မနည်းသော အင်တာနက် စည်းမျဉ်းများကို ချမှတ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်ပိုင် ISP များ၏ ဒေသခံအခွဲများ၊ စီးပွာရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက ဆင်ဆာစနစ်များကို အားစိုက်ခွန်စိုက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသည်။ ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းကို် ဟောင်ကောင်နှင့် မက္ကာအိုတို့တွင် မပြုလုပ်ပါ။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်အရ အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသော အထူးသီးခြားဒေသများ ဖြစ်ကာ လွတ်လပ်သော တရားစီရင်ရေးအာဏာရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းခြင်းကို ကန့်သတ်လိုသည့် ဥပဒေများအပါအဝင် PRC ၏ ဥပဒေအများစုကို မူတည်ခြင်းမရှိပါ။
အွန်လိုင်း ဝေဖန်ရေး အယူအဆများကို ပျက်ပြယ်စေရန် အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ပို၍ကျယ်ပြန့်လာ ခြင်းသည် ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ညစ်ညမ်း မှုဆန့်ကျင်ရေး၊ စာရိတ္တချို့ယွင်းမှုဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများ နှင့် မျိုးနွယ်စု အဓိကရုဏ်းများ နောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ယင်းတို့တွင် အများစုမှာ အမြန်သတင်းပို့ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ၊ စကားပြောခန်းများနှင့် စာသား သတင်းပို့ခြင်းတို့ကို အသုံးပြု၍ စုစည်းခြင်း သို့မဟုတ် အများပြည်သူမြင်သာအောင် တင်ပြခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အင်တာနက် ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားမှာ ၃၀၀၀၀ကျော်ရှိသည်ဟု ကောလဟလပြောဆိုကြသည်။ အင်တာနက် စုပေါင်းဆွေးနွေးပွဲများ(forum)၊ blog များနှင့် Sohu နှင့် Sina ကဲ့သို့ အဓိက Portal တို့တွင် ဝေဖန်သော မှတ်ချက်များသည် များသောအားဖြင့် မိနစ်အနည်းအငယ်အတွင်း ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရသည်။
PRC ၏ အင်တာနက် ထိန်းချုပ်မှု တပ်ဆင် ခြင်းကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားသော နိုင်ငံများထက် ပို၍ ကျယ်ပြန့်ပြီး ပို၍ အဆင့်မြင့်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ အစိုးရက ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် အကြောင်းအရာများသာ ပိတ်ဆို့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးချင်းစီ၏ အင်တာနက် အသုံပြုမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းလည်း ပြုလုပ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ က တရုတ်နိုင်ငံသည် “ကမ္ဘာပေါ်တွင် သတင်းစာဆရာများနှင့် cyber-သဘောထားကွဲလွဲသူများကို ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားမှု အရေအတွက် အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်” ဟု မှတ်ချက်ချသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု ၎င်းတို့ စွဲဆိုသော အကြောင်းရင်းများတွင် နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ အုပ်စုများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ Falun Gong ကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ အွန်လိုင်း အသနားခံလွှာများတွင် ပါဝင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် စာရိတ္တချို့ယွင်းမှုကို အဆုံးသတ်ရန် ဆင့်ခေါ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
၁ စည်းမျဉ်းဥပဒေများ အစ
၃ ရွှေဒိုင်း စီမံကိန်း (Golden Shield Project)
၄ ဥပဒေ ပြုခြင်း
၅ ဆင်ဆာလုပ်ထားသော အကြောင်းအရာများ
၆ Green Dam လူငယ် အစောင့်အကြပ်
၇ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆင်ဆာလုပ်ခြင်း
၈ တီယာနန်မန် ရင်ပြင် ဆန္ဒပြမှုများ ၂၀နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်
၉ ၂၀၀၈ခုနှစ် အိုလံပစ်
၁၀ တစိတ်တဒေသ ဆင်ဆာလုပ်ခြင်း
၁၁ အင်တာနက် လှုပ်ရှားရေးဝါဒီများကို အရေးယူခြင်း
၁၂ ကိုယ်တိုင် ဆင်ဆာလုပ်ခြင်း
၁၄ CERNET တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့်သုတေသနကွန်ယက်
၁၅ ဒေသခံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
၁၆ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကော်ပိုရေးရှင်းများ
၁၈ လိင်မှုရေးရာများ ပါသောအကြောင်းအရာများကို အမြင်ကျယ်အောင်လုပ်ခြင်း
၁၉ အဖွဲ့သားတိုင်းနှင့်ဆိုင်သော တာဝန်
၂၀ ပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ဖြတ်ထွက်ရာတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုများ
၂၁ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ရှောင်ရှားခြင်း
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အင်တာနက် စည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ၁၉၉၃ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ရက် အင်္ဂါနေ့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ အင်တာနက်ဆင်လုပ်ခြင်းကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဗဟိုအစိုးရက ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့သော စည်းမျဉ်း သုံးခုဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ပထမ စည်းမျဉ်းသည် ကွန်ပျူတာ သတင်းအချက်အလက် ကွန်ယက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွက် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ယာယီ စည်းမျဉ်း ဟု အမည်ရသည်။ စည်းမျဉ်းကို ၄၂ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ညီလာခံ (Standing Convention of the State Council)က ၁၉၉၃ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ရက်က အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကို ၁၉၉၆ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်တွင် တရားဝင် ကြေညာခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ခုနှစ် မေလ ၂၀ရက်တွင် ခေတ်နှင့်အညီ မွမ်းမံ ခဲ့သည်။
ပထမစည်းမျဉ်းပါ အကြောင်းအရာတွင် “မည်သည့် ယူနစ် သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းကိုမျှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်မှုကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ရန် ခွင့်မပြုပါ။”(အချက် ၆) “အင်တာနက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးသည် ChinaNet၊ GBNet၊ CERNET သို့မဟုတ် CSTNET တို့မှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားရမည်။” (အချက် ၈) “မည်သူမဆိုသည် အသုံးပြုသူများကို အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရယူမှု ထောက်ပံ့ရန် လိုင်စင်လိုအပ်သည်။” (အချက် ၈) ဟု ဖော်ပြသည်။ ဒုတိယ စည်းမျဉ်းသည် ကွန်ပျူတာ သတင်းအချက်အလက် စနစ်များ၏ လုံခြုံရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအတွက် စည်းမျဉ်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၉၉၄ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ရက်တွင် နိုင်ငံတော်ကောင်စီက အင်တာနက် လုံခြုံရေး ကာကွယ်မှု တာဝန်ကို အများပြည်သူလုံခြုံရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးအပ်ပြီး “လုံခြုံရေး ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ပါ၊ စစ်ဆေးပါ၊ လမ်းညွှန်ပါ။” နှင့် “ဥပဒေနှင့် မညီသော ရာဇဝတ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ပြီးမြောက်အောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ။” ဟူ၍ အခွင့်ပေးအပ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ပြဋ္ဌာန်းချက် စည်းမျဉ်းသည် အများပြည်သူလုံခြုံရေး ဝန်ကြီးဌာနက ၁၉၉၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရယူရေး လုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုမို ရှေ့ဆောင်မှု ပြုခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းသည် ထိခိုက်နစ်နာစေသော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားပြီး အင်တာနက် အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထိခိုက်နစ်နာစေသော လှုပ်ရှားမှုများ ငါးမျိုးကို စာရင်းပြုထားသည်၊ “(၁) ကွန်ပျူတာ သတင်းအချက်အလက် ကွန်ယက် သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခွင့်မရှိဘဲ ကွန်ယက် အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုခြင်း၊ (၂) အခွင့်မရှိဘဲ ကွန်ပျူတာ သတင်းအချက်အလက် ကွန်ယက်တွင် လုပ်ငန်းများကို ဖျက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ထပ်ထည့်ခြင်း၊ (၃) ကွန်ပျူတာ သတင်းအချက်အလက် ကွန်ယက်တွင် memory၊ လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့် ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အချက်အလက်နှင့် အသုံးချ ဆော့(ဖ်)ဝဲကို အခွင့်မရှိဘဲ ဖျက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ထပ်ထည့်ခြင်း ၊ (၄) ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်(စ်)ကဲ့သို့ ပျက်ဆီးစေသော ဆော့(ဖ်)ဝဲများကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်း၊ (၅) ကွန်ပျူတာ သတင်းအချက်အလက် ကွန်ယက်၏ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေသော အခြား လှုပ်ရှားမှုများ” ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သည့် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့မှ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်အဖြစ် အင်တာနက်၏ ရန်သူတော်များ စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၁၉၉၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး ဝန်ကြီး Zhu Entaoသည် ‘အစိုးရ အေဂျင်စီများကို အသရေဖျက်ခြင်း’၊ ‘နိုင်ငံတော်ကို ပြိုကွဲအောင်လုပ်ခြင်း’နှင့်‘နိုင်ငံ့အတွင်းရေးလျှို့ဝှက်ချက်များ’ ပေါက်ကြားခြင်း တို့အတွက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရေးဖြစ်သည့် ဝန်ကြီးဌာနက လုပ်ဆောင်ရမည့် ဥပဒေသစ်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဥပဒေချိုးဖောက်သူများသည် ဒဏ်ငွေ ၁၅၀၀၀ ယွမ် ($၁၈၀၀) အထိ ပေးဆောင်ရနိုင်သည်။ ပိတ်ပင်ခြင်းသည် အများအားဖြင့် အရေးပါမှု အဆင့်အတန်းတူပြီး အရေးပေါ်လုပ်ဆောင်သည်။ အချို့ဆိုဒ်များသည် ပိတ်ဆို့ခံရသော်လည်း အလားတူ ဆိုဒ်များမှာမူ ခွင့်ပြုခြင်းခံရသည် သို့မဟုတ် မြို့တစ်မြို့တွင် ပိတ်ဆို့ခံရပြီး အခြားတစ်မြို့တွင် ခွင့်ပြုထားသည်။ အထူးအခြေအနေများအတွက် ပိတ်ဆို့မှုများကို မကြာခဏ ပြုလုပ်လေ့ ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့် သတင်းထောက်များက ကျန်ဇီမင်း (Jiang Zemin) နှင့် သီးသန့် အင်တာဗျူးလုပ်ရာတွင် နယူးယောက် တိုင်း(မ်) (The New York Times) ကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ဖယ်ရှားထားပြီး အထူးသဖြင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းအကြောင်းကို မေးရာတွင် ၎င်းက ဤကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဟု ဖြေဆိုသွားခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ခုနှစ်က ရှန်ဟိုင်းတွင် APEC ထိပ်သီးညီလာခံ ကျင်းပနေစဉ်အတွင်း CNN၊ NBC၊ နှင့် ဝါရှင်တန်ပို့(စ်) (Washington Post ) ကဲ့သို့ ပုံမှန်အားဖြင့် ပိတ်ထားခြင်းခံရသော မီဒီယာ အရင်းမြစ်များကို ဆက်သွယ်ရရှိနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကြောင်းအရာများကို အစဉ်အမြဲ ထိန်းချုပ်မှုသည် ပိုမို လျော့ပါးလာခဲ့ပြီး ထို ဆိုဒ်သုံးခုလုံးကို ယခုအခါ တရုတ်ပြည်မတွင် ဆက်သွယ်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။် နယူးယောက် တိုင်း(မ်)ကို ၂၀၀၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ရက်တွင် ပြန်လည် ပိတ်ဆို့ထားခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၀၉ နှစ်ဦး ပထမလများ မှ မေလ ၁၇ရက်အထိ ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ BBC သတင်း ၏တရုတ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်လွှင့်မှုကို ပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာ သတင်းအချက်အလက် ကွန်ယက်နှင့် အင်တာနက် လုံ ခြုံမှုကာကွယ်ရေးနှင့် စည်းမျဉ်းဥပဒေ စီမံခန့်ခွဲရေး၏ ကဏ္ဍ ငါးတွင် အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည်- မည်သည့် ယူနစ် သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းကမျှ အောက်ပါ သတင်းအချက်အလက် အမျိုးအစားများကို ဖန်တီးခြင်း၊ ပွားခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ပို့လွှင့်ခြင်းအတွက် အင်တာနက်ကို အသုံးမပြုရ-
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသို့မဟုတ် ဥပဒေများ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခုခံတွန်းလှန်ရန် သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ရန် လှုံ့ဆော်ခြင်း၊
အစိုးရသို့မဟုတ် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို ဖြုတ်ချရန် လှုံ့ဆော်ခြင်း၊
နိုင်ငံကို ပိုင်းခြားစေရန် လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော် စည်းလုံးညီညွှတ်မှုကို ထိခိုက်အောင်လုပ်ခြင်း
နိုင်ငံသားများအကြား အမုန်းပွားခြင်း ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် လှုံ့ဆော်ခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားများ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိခိုက်အောင်လုပ်ခြင်း၊
မုသားများဆိုခြင်း သို့မဟုတ် အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ ကောလဟာလများ လွှင့်ထုတ်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း၏ စည်းကမ်းသေဝပ်မှုကို ပျက်ပြားအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊
မြေပိုင်ရှင်စနစ် အစွဲအလမ်းများ၊ လိင်မှုဆိုင်ရာ စိတ်ကူးစိတ်သန်း ပေါ်ပေါက်စေသော အရာများ၊ လောင်းကစား၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ လူသတ်မှုများကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသူများကို ရာဇဝတ်ပြစ်မှုမကင်းသောလှုပ်ရှားမှုများသို့လှုံဆော်ခြင်း၊ အခြားသူများကိုစော်ကားခြင်းသို့မဟုတ် သူတပါးအကြောင်းမကောင်းပြောသူများကို အမှန်တရားမပြောပဲ ဖုံးကွယ်ထားခြင်း၊
နိုင်ငံတော် ဂုဏ်သတင်းကို ထိခိုက်စေခြင်း၊
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသို့မဟုတ် ဥပဒေများ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေများကို ဆန့်ကျင်သော အခြား လှုပ်ရှားမှုများ။
ရွှေဒိုင်း စီမံကိန်း (Golden Shield Project)[ပြင်ဆင်ရန်]
ရွှေဒိုင်းစီမံကိန်း (တရုတ်ဘာသာ- 金盾工程; တရုတ်ဘာသာ: jīndùn gōngchéng) ကို တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့လုံခြုံရေး ဝန်ကြီးဌာန(MPS)က ပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းကို ၁၉၉၈ခုနှစ်က စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် လုပ်ငန်းစခဲ့ကာ ၂၀၀၆ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၆ရက် ဘေဂျင်းတွင် စီမံကိန်းပထမပိုင်းသည် နိုင်ငံတော် စစ်ဆေးမှုကို အောင်မြင်ကျော်လွှားခဲ့သည်။ MPS ၏ အဆိုအရ ၎င်းသည် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို တိုးတက်စေရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်နှင့် ကွန်ပျူတာ သတင်းအချက်အလက် စနစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ဗဟို ရုပ်မြင်သံကြား (CCTV) အရ ၂၀၀၂ အထိတွင် ရွှေဒိုင်းစီမံကိန်း၏ ပဏာမ လုပ်ငန်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ ဒေါ်လာ သန်း၈၀၀ (RMB သန်း၆၄၀၀ သို့မဟုတ် ပေါင် သန်း၆၄၀ နှင့် ညီမျှသည်) ဖြစ်သည်။
ရွှေဒိုင်းစီမံကိန်းသည် တရုတ်ပြည်မကြီး၏ အပြင်ဘက်တွင် တရုတ်ပြည်၏ မဟာဖိုင်းယားဝေါ(လ်) အရံအတား (၎င်း၏ အခန်းကဏ္ဍကို ကွန်ယက်ဖိုင်းယားဝေါ(လ်)နှင့် ရှေးဟောင်း တရုတ်ပြည်၏ မဟာတံတိုင်းနှစ်ခုလုံးအဖြစ် ရည်ညွှန်းလျှက်)အဖြစ် လူသိများသည်။ စနစ်သည် အင်တာနက် မုခ်ပေါက်လမ်းများတွင် စံသတ်မှတ်ထားသည့် ဖိုင်းယားဝေါ(လ်)အရံအတားများနှင့် ပရောက်ဆီ ဆာဗာများကို ဖြတ်သန်းသွားခြင်းဖြင့် IP လိပ်စာများကို ကာကွယ်ကာ အကြောင်းအရာများကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။ အချို့သော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များက တောင်းဆိုလာပါက စနစ်သည် DNS ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း ကို ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လက်တွေ့ကျမှု မရှိသည့်အတွက် အစိုးရက အင်တာနက်ရှိ အကြောင်းအရာများကို စနစ်ကျစွာ စစ်ဆေးသည့်ပုံ မပေါက်ပေ။ ဒေးဗစ်(စ်) ကာလီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ် (University of California, Davis) နှင့် နယူးမက္ကဆီကို တက္ကသိုလ် (University of New Mexico) တို့မှ သုတေသနပြုသူများက ထိုမဟာဖိုင်းယားဝေါ(လ်)အရံအတားသည် အရံအတား အစစ်မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။ အကြောင်းမှာ ပိတ်ပင်ထားသော အရာများသည် တခါတရံတွင် ရောက်တာများ သို့မဟုတ် စနစ်တစ်ခုလုံးကို ပိတ်ဆို့ခြင်း မခံရဘဲ ဖြတ်သန်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် နိုင်ငံတော် ကောင်စီ အမိန့်အမှတ် ၂၉၁ ကို ချမှတ်ခဲ့ရာ ၎င်းသည် အင်တာနက် အကြောင်းအရာများ ထောက်ပံ့သူများ အတွက် ပထမအကြိမ် အကြောင်းအရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံကို အခြေခံသော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များသည် သီးခြား ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ သတင်း ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များသို့ အချိတ်အဆက် မပြုလုပ်နိုင်ပါ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရပ်ခြား မီဒီယာမှ သတင်းများကို မယူဆောင်နိုင်ပါ။ “လိုင်စင်ရ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများ” သာလျှင် သတင်းများကို အွန်လိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။ လိုင်စင်မရှိသော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များသည် သတင်းများကို ထုတ်လွှင့်လိုပါက အခြားသတင်းမီဒီယာမှ အများပြည်သူသို့ ထုတ်လွှင့်ပြီး သတင်းများကိုသာ ပုံနှိပ်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုဆိုဒ်များသည် နိုင်ငံတော် သတင်းဌာနနှင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ သတင်းအချက်အလက် အေဂျင်စီတို့မှ အတည်ပြုချက် ရယူရမည်။ ဤအမိန့်၏ ပုဒ်မ ၁၁တွင် “၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ဖြန့်ဖြူးသော မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်မဆို၏ ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်ရေးကို သေချာအောင်ပြုလုပ်ရန် အကြောင်းအရာများကို ထောက်ပံ့သူများတွင် တာဝန်ရှိသည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ပုဒ်မ ၁၄က အထိအခိုက်မခံသော မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကို မဆို တရုတ်နိုင်ငံတွင် တရားဝင် အပြည့်အဝ ဆက်သွယ်ရယူမှုကို ခွင့်ပြုသည်- “[...]သည် IIS ထောက်ပံ့သူများသည် ၎င်း၏ မှတ်တမ်းများ၏ မိတ္တူကို ၆၀ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ သင့်လျော်သော နိုင်ငံ့ အာဏာပိုင်တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးရမည်။” နောက်ဆုံးတွင် ပုဒ်မ ၁၅က မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကန့်သတ်ထားရမည်ကို သတ်မှတ်သည်- “IIS ထောက်ပံ့သူများသည် အောက်ပါတို့ကို ဖြစ်စေသော သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မိတ္တူကူးခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း ဖြန့်ဝေခြင်း မပြုရ - [...] နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်း၊ [...] နိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ [...] လူမှုရေး တည်ငြိမ်မှု၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ နိုင်င့ံပေါ်လစီတို့ကို အားနည်းလာခြင်း၊ [...] ဥပဒေသို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းများအရ တားမြစ်ထားသော အခြား သတင်းအချက်အလက်များ”
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသော သိသာထင်ရှားသည့် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်စာရင်း
တရုတ်နိုင်ငံပြည်မ အင်တာနက် ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းကို သုတေသနပြုလုပ်ချက်က ဖော်ပြသည့် ၂၀၀၈ခုနှစ် နွေရာသီ အိုလံပစ် မတိုင်မီ ဆင်ဆာလုပ် ြခြင်းခံရသော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များမှာ-
နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသော ဖယ်လွန်ဂေါင်၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်နှင့် ပတ်သက်သော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များ
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ရက်စက်မှု၊ ၁၉၈၉ တီယာနန်မန် စကွဲ ဆန္ဒပြမှု၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ နှင့် ဒီမိုကရေစီ ဆိုဒ်များကဲ့သို့ အကြောင်းအရာများ မကြာခဏပါသော သတင်း ရင်းမြစ်များ။ ဤဆိုဒ်များတွင် အမေရိကန် အသံ၊ BBC သတင်း နှင့် Yahoo! ဟောင်ကောင် တို့ပါဝင်သည်။
PRC က ဆင်ဆာလုပ်ထားသော ဥပဒေနှင့် မညီသော အကြောင်းအရာများ၊ လူမှုရေး ဝေဖန်တင်ပြချက် သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေး ဝေဖန်တင်ပြချက် များပါနိုင်သော မီဒီယာ ဆိုဒ်များ။ တရုတ် ဝီကီပီးဒီးယား နှင့် LiveJournal တို့မှာ ထိုကဲ့သို့ ပိတ်ဆို့ခြင်း ခံရသောဆိုဒ်များဖြစ်သည်။
ထိုင်ဝမ် အစိုးရ က လက်ခံဖြစ်သော ဆိုဒ်များနှင့် အဓိက သတင်းစာနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား မီဒီယာများနှင့် ထိုင်ဝမ် လွတ်လပ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များပါသော အခြား ဆိုဒ်များ
ညစ်ညမ်းမှု၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံနှင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများပါသော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များ။
ဂိုဏ်းခွဲဝါဒီ ဗဟို တိဘက် အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် “တိဘက်အသံ”၊ အိန္ဒိယ-အခြေစိုက် အတိုက်အခံ ရေဒီယို အဖွဲ့အစည်း တို့၏ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များ။
တရုတ်နိုင်ငံ ကွန်မြူနစ် ပါတီကို ဝေဖန်ထားသော “ဝေဖန်ချက် ကိုးခု” သို့မဟုတ် theepochtimes.comမှ ပုံနှိပ်သော ဆောင်းပါး ကိုးခု
အထက်ပါ စာရင်းမှ BBC သတင်း၊ တရုတ် ဝီကီပီးဒီးယား၊ Yahoo! ဟောင်ကောင်နှင့် အမေရိကန် အသံ တို့သည် နောက်ပိုင်းတွင် ပိတ်ဆို့ထားခံရခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးသည် (၂၀၀၈ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၇ရက်တွင် လေ့လာချက်)။ သို့သော် အမေရိကန် အသံနှင့် Yahoo! ဟောင်ကောင်တို့ကို နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည် ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရပြန်သည် (၂၀၀၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ရက်တွင် လေ့လာချက်)။
၂၀၀၉ခုနှစ်၏ ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် လူမှုရေး ကွန်ယက်များဖြစ်သော ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် (Facebook) နှင့် တွစ်တာ(Twitter) တို့ ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရသည်။ လူမှုရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးဝေဖန်တင်ပြချက်များ ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် (အထက်ပါ စာရင်းမှ LiveJournal နှင့် အလားတူ)။ ဥပမာ တစ်ခုမှာ ၂၀၀၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Xinjiang တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော သေကြေပျက်စီးမှုများပါသည့် အဓိကရုဏ်းများအကြောင်း ဝေဖန်တင်ပြချက် ဖြစ်သည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်း ခံရသည့် အခြားအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ ထိုလှုပ်ရှားသူများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်ကို ဖွဲ့စည်းရန် ထိုကွန်ယက်များကို အသုံးချနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များကို ဘိုင်ဒူး(Baidu)နှင့် ဂူဂဲ(လ်)တရုတ်(Google China)တို့ကဲ့သို့ တရုတ်နိုင်ငံ ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်အချို့က ဦးစားပေးအဆင့် နိမ့်စွာ ညွှန်းဆိုရန် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် တခါတရံတွင် ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို သိသာစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ သားဗက်(Harvard) လေ့လာမှုအရ အနည်းဆုံး ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် ၁၈၀၀၀ခုသည် တရုတ်နိုင်ငံပြည်မအတွင်း ပိတ်ဆို့ထားခြင်း ခံထားရသည်။ နယူယောက်တိုင်း(မ်)၏အဆိုအရဂူဂဲ(လ်(Goodle)သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှနေ၍နိုင်ငံပြင်ပရှိဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များသို့ဆက်သွယ်ရယူရန် ကြိုးပမ်းသော ကွန်ပျူတာ စနစ်များကို ပြုလုပ်ထားသည်။ ဆိုဒ်တစ်ခုသည် ဆက်သွယ်ရယူ၍မရပါက ၎င်းကို ဂူဂဲ(လ်)တရုတ်၏ အမည်ပျက်စာရင်းထဲသို့ ထည့်လိုက်သည်။ သို့သော် ဆိုဒ်တစ်ခုကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ဖယ်ရှားလိုက်ပါက ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များကို ပြန်လည်အညွှန်းတပ်သည်။
Green Dam လူငယ် အစောင့်အကြပ်[ပြင်ဆင်ရန်]
မေလ ၁၉ရက်နေ့တွင် စက်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန ကထုတ်ပြန်သော အသိပေးစာက ၂၀၀၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ရက်မှ စတင်ပြီး ထုတ်လုပ်သူများသည် စက်များကို ပြည်မတွင် ဂရင်းဒမ်(မ်) ဆော့(ဖ်)ဝဲနှင့်တကွ ရောင်းချရန် ပို့ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်သူများသည် ဆော့(ဖ်)ဝဲနှင့်တကွ ပို့ဆောင်သော စက်အရေအတွက်ကို အစိုးရသို့ သတင်းပို့ရန် လိုအပ်သည်။ တရားဝင် ကြေညာချက်က ဆိုသည်မှာ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည် “စိမ်းလန်းသော၊ ကျန်းမာသော လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော အွန်လိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို တည်ဆောက်ရန်နှင့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရှိသော အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကြောင့် လူငယ်များ၏ စိတ်တွင် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။”
နိုင်ငံတော် ကောင်စီ သတင်းအချက်အလက်ရုံး၏ အင်တာနက် အကြောင်းအရာများဆိုင်ရာ ဌာန၏ အရာရှိကြီးတစ်ဦးက ဆော့(ဖ်)ဝဲ၏ တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ “အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို စစ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိ Qin Gang က ပြောကြားသည်မှာ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အင်တာနက်ကို အမြဲဖွင့်ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးသည် ထိခိုက်နိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ရာတွင် ဥပဒေနှင့် အညီ ဖြစ်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဂရင်းဒမ်(မ်)ကို ထုတ်လုပ်သူ Jinhui ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာက “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆော့(ဖ်)ဝဲက အင်တာနက် အသုံးပြုသူများကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းဖို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါက စစ်ထုတ်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
တရုတ်ပြည်ရှိ လူ့အခွင့်အရေး ထောက်ခံသူများနှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုသူများသည် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး ၎င်းတို့က ဆော့(ဖ်)ဝဲသည် ဝက်(ဘ်)ပေါ်တွင် အသုံးပြုသူများကို ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံတို့မှ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်သော်လည်း ၎င်းသည် “ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းကို တိုးချဲ့ရန် အစိုးရ၏ ပါးလွှာစွာ ဖုံးကွယ်ထားသော ကြိုးပမ်းမှုပင် ဖြစ်သည်” ဟု ဆိုသည်။ ကွန်ယက်တွင်လှုပ်ရှားသူများက အွန်လိုင်း ဆန္ဒကောက်ယူခြင်းတစ်ခုကို Sina, Netease, Tencent နှင့် Sohu တို့တွင် ပြုလုပ်ရာ ဆော့(ဖ်)ဝဲကို များစွာသော (၇၀%ထက်များသော) သူများက ငြင်းပယ်ကြသည်။ တောင်ပိုင်း မက်ထရိုပိုလစ်(စ်) ဒေးလီး က ပြုလုပ်သည့် ဆန္ဒကောက်ယူခြင်းတွင်လည်း အလားတူ အဖြေ ထွက်ခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ ၁၀ရက်တွင် တရုတ် ဗဟိုကော်မတီ၏ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ဌာနက တရုတ် မီဒီယာများကို မေးခွန်းများမေးခြင်း သို့မဟုတ် ဝေဖန်သော အယူအဆများ ပုံနှိပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် တောင်းဆိုသော ညွှန်ကြားချက် တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ညွှန်ကြားချက်က အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲများကိုလည်း “အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ကို ပုတ်ခတ်သော အပြောအဆိုများကို” ချက်ချင်း ပိတ်ဆို့ရန် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားခဲ့သည်။Xinhua က “ထောက်ခံမှု Green Dam သည် အဓိကအားဖြင့် အမှန်တကယ် အသုံးပြုသူများထံမှလာပြီး ဆန့်ကျင်သည့် ယူဆချက်များမှာ အဓိကအားဖြင့် မီဒီယာ ထွက်ပေါက်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အနည်းစုဆီမှ လာသည်။” ဟု နောက်ပိုင်းတွင် ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၄ရက်တွင် စက်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဖြစ်သော Li Yizhongက ကွန်ပျူတာ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများသည် အိမ်သို့မဟုတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် ကွန်ပျူတာ အသစ်များနှင့်အတူ ဆော့(ဖ်)ဝဲကို ပေးပို့ရန် မလိုတော့ကြောင်း၊ သို့သော် ကျောင်းများ၊ အင်တာနက်ကဖေးဆိုင်များနှင့် အခြား အများပြည်သူအသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူတာများတွင်မူ ဆော့(ဖ်)ဝဲကို လည်ပတ်စေရန် လိုအပ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ထပ်လောင်း သတင်းအချက်အလက်- တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် အင်တာနက် ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် ဝါဒဖြန့်မှု
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အူရမ်ချီ (Ürümqi) အဓိကရုဏ်း
အစိုးရ ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းသည် "Urumqi" ဆိုသည့် သော့ချက်စာလုံးကို ရှာဖွေခြင်းမပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပြီး Facebook၊ Twitter နှင့် ဒေသတွင်းရှီ Fanfou နှင့် Youku တို့ကို ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ခြင်းမှ ပိတ်ဆို့ထားသည်။ အူရမ်ချီ တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်းများ အကြောင်း သတင်းများအတွက် အဓိကအားဖြင့် ရှင်ဝှာ သတင်းဝန်ဆောင်မှုမှ ရယူကြသည့် တရုတ် သတင်းဆိုဒ်များက အချို့သော သတင်းများတွင် သတင်းမပြည့်စုံမှုအကြောင်း အပြုသဘောမဆောင်သည့် တင်ပြမှုများ မပြုလုပ်နိုင်စေရန် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များရှိ အင်္ဂါရပ်များကို မစွမ်းဆောင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်ဟု ကောက်ချက်ချက်ချသည်။
အူရမ်ချီတွင် အများအဆိုအရ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု မရရှိပါ။ ဒေသတွင်း ဆိုဒ်များနှင့် ဂူဂဲ(လ်) ပေါ်ရှိ အတည်ပြုချက်မရရှိသော တင်ပြချက် အများအပြားကို အစိုးရဆင်ဆာများက "သဘောတိုက်ဆိုင်" အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု အဆိုရှိပြီး အဓိကရုဏ်းနှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရများပါသော အီးမေး(လ်)များကို ပြဿနာ မဖြစ်ပွားစေရန် ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခံရသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ချီတက်ဆန္ဒပြခြင်းနှင့် အဓိကရုဏ်း ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို များမကြာမီ Twitter, YouTube နှင့် Flickr တို့တွင် တွေ့ရှိရသည်။
တီယာနန်မန် ရင်ပြင် ဆန္ဒပြမှုများ ၂၀နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်[ပြင်ဆင်ရန်]
“လူတိုင်းသိသော အကြောင်းရင်းအတွက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလွန်အမင်း မညီညွှတ်သော သဘောထားကို နှိမ်နင်းထိန်းချုပ်ရန် ဤဆိုဒ်ကို ၂၀၀၉ခုနှစ် ဇွန်လ ၃ရက်မှ ၆ရက်အကြား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ဆန္ဒအလျောက် ပိတ်ထားသည်။” Dusanben.com (ဘာသာပြန်)
တီယာနန်မန် ရင်ပြင်တွင် ဒီမိုကရေစီလိုလားသော ဆန္ဒပြမှုများကို အစိုးရ၏ နှိမ်နင်းမှု နှစ်ဆယ်နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နှင့် တိုက်ဆိုင်စွာ အစိုးရသည် အင်တာနက် ပေါ်တယ်များ၊ စုပေါင်း ဆွေးနွေးရာနေရာများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲအုပ်စုများကို ၎င်းတို့၏ ဆာဗာများကို ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေးလုပ်ရန် ဇွန်လ ၃ရက်မှ ၆ရက်နေ့အထိ ပိတ်ထားရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဂါဒီးယန်း က တရုတ်ဆိုဒ် ၃၀၀ကျော်သည် “နှစ်ပတ်လည်တွင် ကျေနပ်ဟန်မပြသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း သတင်းကို တင်ပြထားခဲ့သည်”ဟု သတင်းပို့ခဲ့သည်။ Fanfou နှင့် WordKu.com တို့ကဲ့သို့ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် အချို့သည် အထိန်းအမှတ်နေ့ကို “တရုတ်နိုင်ငံ အင်တာနက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့” ဟု သရော်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံ၏ ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းကို ပရိယယ်ဆင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပိတ်ချထားခြင်းမပြုမီ တစ်ရက်က Twitter, Hotmail နှင့် Flickr အသုံးပြုသူများသည် ထိုဝန်ဆောင်မှုများကို နေရာအနှံ့အပြားတွင် ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။ “အင်တာနက် အကြောင်းအရာများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက် ကျန်းမာသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထောက်ပ့ံပေးရန် ဇွန်လ ၃ရက်မှ ၆ရက်ကို နိုင်ငံတော် ဆာဗာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုကို အများပြည်သူများက ကျယ်ပြန့်စွာ ထောက်ခံကြသည်။” –တရုတ်နိုင်ငံ ဆင်ဆာများ၊ တောင်တရုတ် နံနက်ခင်းသတင်း
အစကနဦးတွင်၊ အိုလံပစ်ရွာစာနယ်ဇင်းစင်တာတွင် အင်တာနက် ကြည့်ရှုနိုင်ခွင်ကို ဆင်ဆာလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း တရုတ်အစိုးရ၊ IOC နှင့် ဂျက်(စ်)ရော့(ခ်) တို့က ပြောဆိုခဲ့ပေသည်။ သို့ရာတွင် ဇူလိုင်လ၂၅ရက် အိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲ ပြီးနောက်တွင် စာနယ်ဇင်းဌာနသို့ရောက်ခဲ့သည့် သတင်းစာဆရာများက နိုင်ငံရေးအရ အထိခိုက်မခံသော အကြောင်းအရာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး၊ IOC က “အချို့သောကန့်သတ်ချက်များ”ကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် သဘောတူညီထားကြောင်း သိရှိလာခဲ့သည်။IOC စာနယ်စင်းချုပ် ကီဗင်ဂေါ့(စ်)ပါ “ကစားပွဲကျင်းပစဉ်အချိ်န်အတွင်း ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ခွင့်သည် အကန့်အသတ်များ ရှိလိမ့်မည်ဟု BOCOG က ကြေညာခဲ့သည်ကို မြင်ရသည့်အတွက် ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါ။ ယခု ကျွန်တော်နားလည်သည်မှာ ကစားပွဲများနှင့် မသက်ဆိုင်ဟု ယူဆသည့် အချို့သော အထိအခိုက်မခံနိုင်သော ဆိုဒ်များကို ပိတ်ထားလိမ့်မည်ကို အိုင်အိုစီအရာရှိအချို့တို့က တရုတ်တို့နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်”ဟု ဝန်ခံခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားမီဒီယာကို ဤသီးသန့် သဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းကြားခြင်းမရှိ။ IOC စာနယ်ဇင်းချုပ် ကီဗင်ဂေါ့(စ်)ပါ က အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပစဉ်အတွင်း အင်တာနက် ဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ခွင့်ကို လုံးဝ ကန့်သတ်ထားမည် မဟုတ်ကြောင်း ထင်မြင်ချက်ကို ပေးခဲ့သည့်အတွက် သတင်းစာဆရာများအား တောင်းပန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ၂၀၀၈ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ရက်နေ့တွင် BOCOG တရုတ်တို့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဆွန်းဝိဒ် (Sun Weide)က မီဒီယာသည် “အဆင်ပြေပြီး၊ လုံလောက်သော” အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့် ရလိမ့်မည်ဖြစ်ဟု ရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားသည်။ သို့ရာတွင်၊ တရုတ်နိုင်ငံ ဥပဒေများအရ တားမြစ်ထားသည့် သို့မဟုတ် နိုင်ငံ ကောင်းကျိုးကို ထိခိုက်သည့် မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့မှုအား အစိုးရက ခွင့်ပြုလိမ့်မည် မဟုတ်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောကြားသွားသည်။IOC က လက်ရှိဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် လက်ခံကျင်းပသော တိုင်းပြည်အပေါ် ဆိုးရွားစွာ ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်ဟု ကန့်ကွက်ပြီးသည့်နောက်တွင်၊ တရုတ်ပြည်သည် နိုင်ငံရေးအရ အထိအခိုက် မခံနိုင်သည့် အပိုင်းများ မပါသည့် အင်္ဂလိပ် ဝီကီပီးဒီးယား အပါအဝင် အချို့သော အင်တာနက် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များအား ဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ခွင့်ကို ပြန်လည် ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိန်းချုပ်မှုများ ဆက်လက် ရှိနေလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တားမြစ်ထားသော ဆိုဒ်များ၏ နောက်ဆုံးပိတ် စာရင်းက အဘယ်စာရင်း ဆိုသည်ကိုမူ ရှင်းလင်းမှု မရှိကြောင်း နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပုံနှိပ်ရေးစင်တာတွင် ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းသည် အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဆင့်ကို တိုးတက်စေနိုင်သည့် ၎င်း၏ ကြေညာချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးထွားလာသော သံသယကို ထပ်လောင်းစေခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားသား သတင်းစာဆရာများ ၂၀၀၀၀ခန့်မှာ တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ခဲ့ရသည်ဟု ထောက်ပြခဲ့သော နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့က“ကတိမတည်မှု”ကို ရှုတ်ချခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ အင်တာနက် တရားမဝင် သတင်းအချက်အလက်များ သတင်းပေး စင်တာ၏ “ဥပဒေမဲ့ဖြစ်သော” ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များအပေါ် အိုလံပစ်ပွဲမတိုင်မီ နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့က Qingdaonews.com၊ 21CN၊ Sichuan အွန်လိုင်း၊ Shenzhen အွန်လိုင်း၊ Tom အွန်လိုင်း နှင့် cjn.cn တို့ကို ယာယီ ပိတ်ချထားခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အထိအခိုက်မခံသော အကြောင်းအရာများပါသော အချို့ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များနှင့် ဘလော့ဂ်များ ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရသည်၊ ဥပမာ tecn.cn နှင့် Xici.net ရှိ သတင်းလွှာသင်ပုန်း ဝန်ဆောင်မှုများ။
၂၀၀၈ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁ရက်နေ့တွင် ရောက်တာ(စ်)က အင်တာနက် ကန့်သတ် ်မှုများကို အိုလံပစ် သတင်းထောက်များအတွက် ရုပ်သိမ်းလိမ့်မည် ဟုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝေဖန်မှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေနှင့် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ အပါအဝင် ယခင်က ပိတ်ဆို့ထားခဲ့သော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်အချို့ကို ပြန်လည်၍ ဆက်သွယ်ရရှိနိုင်ခဲ့သည်။ ဖယ်လွန်ဂေါင်းနှင့် တိဘက် တို့နှင့် ပတ်သက်သော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် အများအပြားမှာ ဆက်လက် ပိတ်ဆို့ခံထားရသည်။ BBC ၏ တရုတ်ဘာသာဆိုဒ်ကို ကြိုးကြားကြိုးကြား ဆက်သွယ်ရယူနိုင်လိုက်၊ ပိတ်ဆို့ခံရလိုက် ဖြစ်သည်။ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်နောက်ပိုင်းတွင် ယခင်ကတားမြစ်ထားသော BBC ၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်ကို ဖွင့်ထားပေးသည်မှာ ဟောင်ကောင်အခြေပြု အပ်ပယ်(လ်) ဒေးလီးကဲ့သို့ ဆိုဒ်ကို ဖွင့်စဉ်နှေး နေလျှင်သာဖြစ်သည်။ သို့သော် တရုတ်ဘာသာဆိုဒ်သည် ၂၀၀၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပိတ်ဆို့ခံရခဲ့ပြန်သည်။
နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့က တရုတ်ဘာသာဆိုဒ်မှလွဲ၍ ၎င်း၏ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဖွင့်နိုင်ကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ တရုတ်ဘာသာဆိုဒ်မှာ ပိတ်ဆို့ခံရဆဲ ဖြစ်သည်။ ယခင်က ဆင်ဆာလုပ်ခံထားရသော နိုင်ငံခြား ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များကို အိုလံပစ်ပွဲ ကျင်းပစဉ် ဆက်သွယ်ရယူနိုင်သော်လည်း နာမည်ကျော်ကြားသော အင်တာနက် စကားပြော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သော "QQ" အပါအဝင် ပြည်တွင်း ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များနှင့် အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကို ကန့်သတ်ထားမှုများကမူ ပိုမိုတင်းကြပ်လာခဲ့သည်ဟု နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့က ဆိုသည်။
၂၀၀၈ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂ရက်နေ့တွင် Associated Press က IOC ၏ တောင်းဆိုချက်ကြောင့် တရုတ်စီမံသူများက အချို့ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ဖယ်ရှားပေးသော်လည်း နွေရာသီအားကစားပွဲ သတင်းစာဆရာများအတွက် ဆင်ဆာများ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဟု တင်ပြခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံအရာရှိများနှင့် IOC ရာထူးမြင့်မားသော အသင်းဝင်များက တရားဝင် အားကစားပွဲ သတင်းစာဆရာများအတွက် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းရှိမည်မဟုတ် ဟုထပ်ခါထပ်ခါ ပြောခဲ့သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရက ဆိုဒ်အများအပြား- ဥပမာ ဖယ်လွန်ဂေါင်းနှင့် ပတ်သက်သော စိတ်ဓာတ်ရေးရာ လှုပ်ရှားမှု- ကို ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့သည့် ဆိုဒ်များမှာ နေ့စဉ်ပြောင်းလဲနေပုံရသည်။ အချို့ သော့ချက်စာလုံးများကို ရှာဖွေရာတွင် မျက်နှာပြင် အလွတ်သာ ရလဒ်အဖြစ် ဖော်ပြသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဘလော့ဂ်များကို လက်ခံထားသော ဆိုဒ်မများလည်း ပုံမှန်အားဖြင့် ပိတ်ဆို့ခံရသည်။ဩဂုတ်လ ၄ရက်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တိဘက်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးနှင့် တားမြစ်ထားသော ဖယ်လွန်ဂေါင်း စိတ်ဓာတ်ရေးရာ လှုပ်ရှားမှု ပါဝင်သော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များကို အိုလံပစ် နေရာ အတွင်းနှင့် အပြင်တို့တွင် ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ခြင်းမရှိမြဲ ဖြစ်ခဲ့သည်။
အိုလံပစ် အားကစားသမားများသည် ဆန္ဒပြပွဲကို သိမ်မွေ့စွာတင်ပြထားသော တိဘက်တန်လိုလားသော အယ်လဘမ် ကို ဆွဲချကူးယူကြောင်း ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Apple, Inc.၏ အွန်လိုင်း အိုင်ကျူး(န်)စတိုးကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသည်။ သို့သော် ဤသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အစိုးရက မဖျက်သိမ်းမီအထိ အချိန်တိုအတွင်းသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ တိဘက်တို့အတွက် သီချင်းများ အယ်လဘမ်ကို The Art of Peace Foundation ဟု ခေါ်သော အုပ်စုတစ်ခုမှ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး လူသိများသော အဆိုတော်များ နှင့် သီချင်းရေးသူများဖြစ် သော Sting၊ Moby၊ နှင့် Suzanne Vega တို့ မှ တင်ဆက် သည့် သီချင်း အပုဒ် ၂၀ ပါဝင်သည်။
အင်တာနက် လှုပ်ရှားရေးဝါဒီများကို အရေးယူခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဝမ်ရှောင်နင်း(Wang Xiaoning) နှင့် အခြား တရုတ် လှုပ်ရှားရေးဝါဒီ သမားများတို့ကို အမည်မဖော်ဘဲ ရေးသားမှုကို အင်တာနက် စာပို့စာရင်းတစ်ခုအား ပို့ရန် ရာဟူးအီးမေး(လ်) စာရင်းကို အသုံးပြုခဲ့သောကြောင့် ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ဒဏ် ၁၀နှစ်ချခဲ့သည်။ တရုတ်အစိုးရ၏ ဖိအားပေးမှုကြောင့် နောက်ဆုံးတွင် ထိုရေးသားမှုအား ယာဟူးက ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်း၏ အကူအညီဖြင့် ဝမ်နှင့် အခြား အွန်လိုင်း လှုပ်ရှားဝေဝါဒီ ရှိတောင် တို့က ၎င်းတို့မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်သည်ကို ခွဲခြားနိုင်ရန် အင်တာနက် ထောက်ပ့ံသူက တရုတ်အစိုးရကို သတင်းပေးခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီ လိုလားသော စာရေးသူများအား နှိပ်စက်ညှင်းပန်းရာတွင် အားပေးအားမြှောက်ပြုသည်ဟု စွပ်စွဲပြီး ရာဟူးကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်၊ “ဟန့်တားနှောင့်ယှက်မှုဖြစ်အောင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်သည့်” အတွက်တစ်နှစ်အလုပ်ဖြင့်ပြန်လည်ပညာပေးခြင်းခံရမည်ဟုအမိန့်ချမှတ် ခဲ့ကြောင်း လျူရှောင်ကွန်း (Liu Shaokun)၏ မိသားစုက အကြောင်းကြားခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ လျူရှောင်ကွန်သည် စီချွမ်ပြည်နယ်ရှိ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပြိုကျနေသော ကျောင်း အဆောက်အဦများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူကာ ယင်းပုံများကို အွန်လိုင်းတွင် တင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက်များကို လက်ဝယ်ထားရှိသည်ဟု သံသယဖြင့် ဟွမ်းကျူ (Huang Qi)ကို တရားဝင်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဟွမ်းသည် နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနနှင့် စကားပြောဆိုခဲ့ပြီး ကျောင်းများ ပြိုကျသွားရာတွင် သားသမီးများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော မိဘများ၏ ဒုက္ခများအကြောင်း သတင်းများကို သူ၏ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တင်ခဲ့သည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန က ISP များအားလုံး၏ ဒေတာစင်တာများအား ဩဂုတ်လ ၁-၂၅ ရက်အတွင်း သော့ခတ်ပိတ်ထားရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဤအချိန်ကာလ အတောအတွင်း ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ရန် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဒေတာစင်တာအတွင်းသို့ ဝင်၍မရပါ။ တရားမဝင် သတင်းအချက်အလက်များ ပါသော ဆိုဒ်များမှာ အလိုအလျောက် ပိတ်ဆို့ခြင်း ခံရသည်။ ရန်လိုသော အမှုထမ်းများကို ဒေတာစင်တာများအတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် တရားမဝင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ထပ်လောင်းထည့်ခြင်း တို့ကို တားဆီးရန်အတွက် သေချာအောင် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု အာဏာပိုင်များကို ပြောဆိုရေးသားခဲ့သည်။ ISP/IDC တို့က သုံးစွဲသူ ဖောက်သည်များထံသို့ “ပိတ်ချလိုက်ခြင်း သတိပေးစာ” ပေးပို့ခဲ့သည်။
ဩဂုတ်လ ၁ - ၂၅ ရက်အတွင်း အမိန့်များကို ကုမ္ပဏီများ လက်ခံရရှိခဲ့သည်။-
ဒေတာစင်တာများအတွင်းသို့ သုံးစွဲသူ ဖောက်သည်များ ဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
သုံးစွဲသူ ဖောက်သည်များသည် hardware ပစ္စည်းအသစ်များကို ထပ်မံထည့်နိုင်မည် မဟုတ်။
တရားမဝင်သော သတင်းအချက်အလက်များ ပါရှိသည့် ဆိုဒ်များသည် အလိုလျောက် ပိတ်ဆို့ပစ်ခြင်း ခံရမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် တောင်းဆိုနိုင်သော်လည်း ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များသည် ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကို ဖွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
ဖောက်သည်များ အကျိုးအလို့ငှာ ကုမ္ပဏီများက အောက်ပါတို့ကို အဆိုပြုခဲ့သည်။ -
သုံးစွဲသူ ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ ဆိုဒ်များကို သေသေချာချာ စီမံခန့်ခွဲသင့်သည်။ ဆွေးနွေးပွဲဖိုရမ် ဖျန်ဖြေရေးသမားများက ထုတ်ပြန်ခြင်း မပြုမီ သတင်းအသစ် မည်သည်ကိုမဆို စိစစ်သင့်သည်။ သုံးစွဲသူ ဖောက်သည်များသည် ဆွေးနွေးပွဲ ဖိုရမ်များ အပါအဝင် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်မှုပြုနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံးကို ပိတ်ပစ်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အကယ်၍ ဖောက်သည်က တရားမဝင် သတင်းများကို စစ်ထုတ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ဆိုဒ်များအား ပိတ်ဆို့ပစ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဖောက်သည်တစ်ဦးက ဟတ်(ဒ်)ဝဲ အသစ်ထပ်ထည့်မည်ဆိုပါက ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်ပါ။
PRC တွင် အင်တာနက်ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းအား ခေါ်တွင်သည် “အသုံးပြုသူများမှာ စောင့်ကြည့်ခြင်း ခံရသည်ဟူသော အသိဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင် ဆင်ဆာလုပ်ရန်အတွက် အားပေးသော ပနော့(ပ်)တီကွန် (အားလုံးအား တစ်နေရာတည်းမှ မြင်နိုင်သော)” ဟု ခေါ်ကြသည်။ ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းကို လိုက်နာစေခြင်း (သို့မဟုတ် လိုက်နာအောင် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း)သည် တစ်ဦးချင်း နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက တရားဥပဒေနှင့် စီးပွားရေး တန်ပြန်ဂရက်ရိုက်မှုများကို ရှောင်ရှားရန် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို လိုလိုလားလား မိမိဘာသာ ဆင်ဆာလုပ်သည့် chilling effect (အင်တာနက် လှုပ်ရှားမှုကို ငြိမ်သက်စေရန် ဥပဒေဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှု အသုံးပြုခြင်း)ကို ဖန်တီးသည်။ အငြင်းပွားဖွယ် နာမည်မှန် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပေါ်လစီကို တရုတ်ပြည်မကြီးရှိ အချို့သော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များအပေါ် လိုက်နာစေခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပရော်ဖက်ဆာ ယန်တောင်း ဘီအိုင် (Yantao BI)က ၂၀၀၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ရက်နေ့တွင် အစီရင်ခံခဲ့သည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရှိ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှ ဆင်ဆာလုပ်ထားသော စကားလုံးများစာရင်း
တားမြစ်ပိတ်ဆို့မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ တရုတ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပေါ်ရှိ အချို့သော အသုံးအနှုန်းများ၏ ရှာဖွေခြင်းရလဒ်များကို စိစစ်ရန် ဖြစ်သည်။ ဤတရုတ် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်များရော(ဥပမာ yahoo.com.cn နှင့် yahoo.com.cn) ပြည်တွင်းအင်ဂျင်များ(ဥပမာ Baidu) ပါ နှစ်မျိုးလုံး ပါဝင်သည်။ ဤတရုတ်ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်များတွင် ဆင်ဆာလုပ်ထားသော အဓိကသော့ချက်စကားလုံးများကို ရှာဖွေရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ရလဒ် အနည်းငယ်သာ ရလိမ့်မည် သို့မဟုတ် လုံးဝရလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ Google.cn က အောက်ပါစာတမ်းကို စာမျက်နှာ အောက်ခြေတွင် ဖော်ပြလိမ့်မည်။- “ပြည်တွင်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ၊ ရှာဖွေခြင်းရလဒ် အစိတ်အပိုင်းအချို့မှာ ဖော်ပြမထားပေ။”
ထို့အပြင်၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆင်ဆာလုပ်ထားသော အသုံးအနှုန်းများအား ဆက်သွယ်ခြင်းသည်လည်း မဟာဖိုင်းယားဝေါ(လ်) အရံအတား အားဖြင့် ပိတ်ပစ်ခြင်း ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ပြီးနောက်တွင် မိနစ်အတော်ကြာ ပြန်လည် လုပ်ကိုင်၍ ရမည်မဟုတ်ပေ။ ဤသည်မှာ HTTPနှင့်POP အပါအဝင် ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ခြင်းများ အားလုံးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်သည်။ သို့သော် ရှာဖွေနေစဉ်အတွင်း ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်း (reset)ပြုလုပ်ရန် ပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းမပြုမီ၊ အမည်အားဖြင့် ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဂူးဂဲ(လ်)နှင့် အော(လ်)တာဗစ်(စ်)တာ တို့အပါအဝင်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် အများအပြား တားမြစ်ပိတ်ဆို့ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ဘလော့ဂ်များအတွက် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခု ဖြစ်သော တက္ကနိုရာတီ သည်လည်း ပိတ်ဆို့ခြင်း ခံထားရသည်။
ကွဲပြားသော ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းကို နည်းမျိုးမျိုးဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ကြသည်။ ဥပမာ၊ ဘင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်လွယ်ကူအောင်လုပ်ထားသော တရုတ်အက္ခရာများဖြင့် (PRC တွင်သုံးသော) ရှာဖွေရေးပြုလုပ်ခြင်းမှ ရရှိသည့် ရှာဖွေရေး ရလဒ်များကို ဆင်ဆာပြုလုပ်သည်ဟု သတင်းရသည်။ သို့ရာတွင် မိရိုးဖလာ တရုတ်အက္ခရာများ (ထို်င်ဝမ်နှင့် အခြားတစ်နေရာရာတွင်သုံးသည့်)တွင်မူ ဆင်ဆာမပြုလုပ်ပေ။ ဂူးဂဲ(လ်)ရှာဖွေရေး ရလဒ်များသည် တရုတ်ပြည်မကြီးတွင် အခြေပြုသော google.cn ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို အသုံးပြုသလော သို့မဟုတ် တရုတ်ပြည်ပြင်ပတွင် အခြေပြုသော ဂူးဂဲ(လ်) ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို အသုံးပြုသလောပေါ် မူတည်ပေသည်။ google.cn ရှာဖွေရေး ရလဒ်များတွင် ပိတ်ဆို့ထားသော စာရင်း၌ပါရှိသော စာမျက်နှာများ ရှာဖွေရေးပေါ်တွင် ရောက်လာပါက အချို့သော ရလဒ်များကို ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါကြောင်း စာတမ်းပါရှိသည်။
CERNET တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့်သုတေသနကွန်ယက်[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၀၄ခုနှစ်ကတည်းက SMTH BBS နှင့် YTHT BBS အပါအဝင် တက္ကသိုလ်များရှိ များပြားသော သတင်းလွှာ သင်ပုန်းစနစ်များ(Bulletin Board Systems) များအား ပိတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်သူများ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံခြားဆိုဒ်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမှာ အနောက်နိုင်ငံများတွင် အများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့သော်လည်း၊ အမှန်စင်စစ် ဤသည်မှာ အင်တာနက် ဆင်ဆာလုပ်ရန် PRC ၏ ကြိုးပမ်းချက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာလျှင် ဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်မကြီးအတွင်း ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများကို ထောက်ပံ့သူများအား ဆင်ဆာလုပ်နိုင်စွမ်းသည် အတော်ပင် ပိုမိုထိရောက်မှု ရှိသည်။ ISP များနှင့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့သူများသည် သုံးစွဲသူများ၏ ပြုမူကျင့်ကြံပုံအပေါ် ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိခြင်းကို တွေ့ရှိသွားမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် သုံးစွဲသူများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ကန့်သတ်လျက်ရှိသည်။
ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့သူများက သုံးစွဲသူ ဖောက်သည်၏ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်သည့် အယ်ဒီတာနေရာကို တာဝန်ယူထားသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်ဝေသူများ ဖြစ်လာပြီး သုံးစွဲသူများက ကျူးလွန်သော အသရေဖျက်သော အရေးအသားနှင့် အခြားသော မှားယွင်းခြင်းများအတွက် တရားဥပဒေအရ တာယူရှိပေသည်။ အားလုံးသော အင်တာနက် စကားပြောခန်းများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ forum များအား စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးရန် အစိုးရတွင် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း အရင်းအမြစ်များ မရှိသော်လည်း၊ ပိတ်ပစ်ခြင်း ခံရမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်မှုက အရပ်သုံးစကားဖြင့် “big mamas”ဟု လူသိများသော အတွင်းရေး ဝန်ထမ်းများကို အင်တာနက်တွင် အကြောင်းအရာများကို ထောက်ပံ့ပေးသူများက ခန့်ထားစေခဲ့သည်။ ယင်းတို့သည် နိုင်ငံရေးအရ အထိအခိုက်မခံသော forum သုံးသပ်ချက်များကို ရပ်တန့်ပြီး ဖယ်ရှားပစ်သည်။
Shenzhen တွင် ဤတာဝန်များကို ရဲကဖန်တီးခဲ့သော ကာတွန်းဇာတ်ကောင်များ ဖြစ်သည့် Chachaနှင့် Chacha စုံတွဲက တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ယင်းတို့က Shenzhen အာဏာပိုင်များ၏ တိုးချဲ့ထားသည် online ‘police presence’ကို ကူညီသည်။ဤကာတွန်းများမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံအဝှမ်း ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး အင်တာနက် အသုံးပြုသူများကို ၎င်းတို့အား စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ‘အထိအခိုက်မခံသော’ သို့မဟုတ် ‘ထိခိုက်နစ်နာစေသော’ အရာများကို အင်တာနက်ပေါ်သို့ တင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် သတိပေးလျက်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် အင်တာနက်တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများကို ထောက်ပံ့ပေးသူများသည် တန်ပြန်ဗျူဟာအချို့ကို ကိုယ်ပိုင်ပြုခဲ့ကြသည်။
တစ်ခုမှာ နိုင်ငံရေးအရ အထိအခိုက်မခံသော အဖြစ်အပျက်များကို online ပေါ်တင်ပြီး အစိုးရမှ မကျေနပ်ကြောင်း ပြောလာသော အခါတွင်မှ ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအကြောင်းအရာကို online ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော နာရီများ သို့မဟုတ် ရက်များတွင် လူများကဖတ်ရှုကြပြီး၊ ထိုအကြောင်းအရာအား ဖယ်ရှားလိုက်ရသော အခါတွင်မူ သတင်းမှာ လူအများအကြား ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ဤကိစ္စဖြစ်ပွားခဲ့ရသော သတိပြုမိလောက်သော အကြောင်းအရာ တစ်ခုမှာ ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခြင်းကို တုံ့ပြန်ရာတွင်မှ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ကလေးများထံတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့သော မီးကျည်မီးပန်းများမှာ တရားမဝင် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟူသော ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ဒေသတွင်း တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားသောအခါတွင် ဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်း တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက အင်တာနက်ပေါ်မှ ထိုအကြောင်းအရာ ဖယ်ရှားပစ်ရန် ဇွတ်အတင်း စေခိုင်းခဲ့သော အချိန်တွင်မူ၊ သတင်းမှာ ကျယ်ပြန့်စွာပင် ပျံ့နှံ့နေပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အင်တာနက်တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများကို ထောက်ပံ့သူများသည် ဆင်ဆာလုပ်ထားသော ဆွေးနွေးပွဲforum သုံးသပ်ချက်များကို အဖြူရောင် နေရာလပ်ဖြင့် မကြာခဏအစားထိုးတတ်သည်။ ယင်းသို့ပြုခြင်းသည် အာဏာပိုင်များကို ဝေဖန်သော သုံးသပ်ချက်များကို တင်ပြပြီးဖြစ်ကြောင်း စာဖတ်ပရိသတ်ကို သိစေသည်။ မကြာခဏ ထင်မြင်ချက်ပေးသည်မှာ သူတို့ဘာလုပ်ကြမည် ဆိုသည်ကိုပင်။ ထိုဝေဖန်ချက်များသည် မည်သို့သော အကြောင်းအရာများဖြစ်မည်ကို မကြာခဏဆိုသလိုပင် ခန့်မှန်းစေခဲ့သည်။
၂၀၀၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Xiamen မြို့၌ ဓာတုစက်ရုံတစ်ရုံ ဆောက်ရန် ကြံရွယ်နေခြင်းအပေါ် ဆန့်ကျင်ပြီး စုရုံး၍ဆန္ဒပြရန်အတွက် text messages ခေါ် သတင်းများနှင့် online ဆက်သွယ်ရေးများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသောကြောင့် ယင်းနောက်တွင် အမည်မဖော်ပြဘဲonline ပေါ် တင်ခြင်းများကို တားမြစ်မည်ဟု ယင်းမြို့က ကြေညာခဲ့သည်။ ရှာမန်မြို့၌ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် website ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ပေါ်တွင် သတင်းများတင်သောအခါ အင်တာနက် အသုံးပြုသူများက မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သက်သေကို ပေးရန် လိုအပ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ အချို့ဟိုတယ်များတွင် အင်တာနက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ကွန်ပျူတာများအနီးတွင် ထားခြင်းဖြင့် အင်တာနက် အသုံးပြုသူများကို တရုတ်နိုင်ငံတွင်း အင်တာနက် ဝင်ရောက်ကြည့်ခွင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် အကြံပေးလျက်ရှိသည်။ အခြားသောအရာများအနက် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် နိုင်ငံရေးအရ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိသော သတင်းများကို ချိတ်ဆက်ခြင်းမှ တားမြစ်သည်။ ၎င်းတို့ ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါ တရားဥပဒေနှင့်ဆိုင်သော အကျိုးဆက်များကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထားသည်။ ၂၀၀၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင်၊ blog များနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ forum များ ကဲ့သို့သော အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်နိုင်သော ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် ဒေတာစင်တာအချို့ကို ပိုင်းခြားဝေဖန်ခြင်း မရှိဘဲ ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်း လက်ခံဖြစ်သော အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်နိုင်သော ဆိုဒ်များ၏ ခန့်မှန်းခြေ ထက်ဝက်မှာ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရသည်ဟု CBS က အစီရင်ခံခဲ့သည်။
လူအများအငြင်းပွားဖွယ် ကိစ္စတစ်ရပ်မှာ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများက PRCအစိုးရကို ဆိုဒ်များကို ပိတ်ဆို့ရန်အတွက် ပစ္စည်းကိရိယာများ ပံ့ပိုးထောက်ပံ့သင့်သလော ဟူ၍ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို ကန့်သတ် ချုပ်ခြယ်မှုများ အပါအဝင် ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်းမှ အမြတ်အစွန်း ရရှိခြင်းသည် ကုမ္ပဏီများအတွက် မှန်ကန်သော လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါဟု အချို့က[အဘယ်သူနည်း] အကျိုးအကြောင်းပြ ပြောဆိုသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Cisco Systems Inc. ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများက ထောက်ပံ့သော ပစ္စည်းကိရိယာများသည် စံနမူနာ အင်တာနက် ဖွဲ့စည်းပုံအစိတ်အပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပြီး၊ ဤကဲ့သို့သော ပစ္စည်းကိရိယာများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းသည် တကယ်တန်းတွင် သတင်းအချက်အလက်များ စီးဆင်း မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ၊ အနောက်ဘက်တိုင်းပြည်များမှ အကူအညီမပါပဲ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ဖွဲ့စည်းပုံအစိတ်အပိုင်းများကို PRC ကလုံးဝ ဖန်တီးနိုင်သည်ဟု အခြားသူများက[အဘယ်သူနည်း] အကျိုးအကြောင်းပြ ပြောဆိုသည်။
အကယ်၍ အာဏာပိုင်များက ဆင်ဆာလုပ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများအပေါ် ပံ့ပိုးနေခြင်းကို ကုမ္ပဏီများက ရပ်တန့်လိုက်ပါက ပြုပြင်ပြောင်းလည်းရန် အစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးနိုင်သည်ဟု လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (Human Rights Watch) ကဲ့သို့ လူ့အခွင့်အရေးကို ထောက်ခံပြောဆိုသူများနှင့် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့ (Reporters Without Borders) ကဲ့သို့ လူထုဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့များက ကွဲပြားခြားနားစွာ ဆင်ခြေပေးသည်။ တရုတ်ပြည်မကြီးအတွင်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အလို့ငှာ ပြည်တွင်းရှိ အကြောင်းအရာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူများ ထားရှိခြင်းအပါအဝင် PRC အစိုးရ၏ဆန္ဒများကို လိုက်နာသော Yahoo! ( အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိရန် Shi Tao ကိုကြည့်ပါ) AOL နှင့် Skype ကဲ့သို့သော နိုင်ငံခြားမှ အကြောင်းအရာ ထောက်ပံ့သူများသည် အလားတူ အကျပ်ရိုက်မှုမျိုး ကြုံတွေ့ရသည်။
တရုတ်ပြည်မကြီး၏ ဥပဒေများအရ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ ဆက်လက်ပေးခြင်းသည် တရုတ်ပြည်သူများကို ပိုမိုအကြိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်ဟု ဆင်ခြေပေးကာ Microsoft (မိုက်ခရိုဆော့(ဖ်)) သည်လည်း ယင်း၏ဘလော့ဂ်ဝန်ဆောင်မှု Windows Live Spaces ၌ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများကို စတင်ဆင်ဆာ ဖြတ်ခဲ့သည်။ တရုတ်ဂျာနယ်သမား မိုက်ကယ်(လ်)အင်တီ၏ Windows Live Spaces ပေါ်၌ရှိသော ဘလော့ဂ်အား မိုက်ခရိုဆော့(ဖ်)က ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သူက တရုတ်များအတွက် ဝင်းဒိုးလိုက်(ဖ်)နေရာများ မရှိခြင်းထက် ရှိခြင်းက သာ၍ကောင်းသည်ဟု သဘောတူခဲ့သည်။
၂၀၀၇ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် MySpace ၏တရုတ်မူကွဲသည် ယင်းဝန်ဆောင်မှု၏ အခြားနိုင်ငံတကာ မူကွဲများနှင့်မတူ ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ကွဲပြားခြားနားချက် များစွာ ရှိသည်။ ဘာသာရေး နိုင်ငံရေးတို့နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်များမှာ ဆွေးနွေးချက်ဖိုရမ်များတွင် မပါရှိပေ။ ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး၊ ဒလိုင်လားမား၊ ဖယ်လွန်ဂေါင်းနှင့် အခြား “မလျော်ကန်သော ခေါင်းစဉ်များ’’ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် တင်ခြင်းကို ကာကွယ် ရန် စစ်ထုတ်ခြင်း စနစ်တစ်ခု ထပ်လောင်းထည့်ခဲ့သည်။ “အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ လျှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားခြင်း၊ အစိုးရကိုဖြိုဖျက်ခြင်း၊ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပျက်စီးပြိုလဲအောင်လုပ်ခြင်း၊ ကောလဟာလများ လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အေးချမ်းသောလူမှုရေး အခြေအနေများကို နှောင့်ယှက်ခြင်း” တို့အပါအဝင် အခြားအသုံးပြုသူများ၏ တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်မှုများအတွက် “အကျင့်သိက္ခာပျက်ပြားခြင်း” သတင်းပို့နိုင်ခွင့်ကိုလည်း အသုံးပြုသူများအား ပေးထားသည်။
ထို့အပြင်၊ နိုင်ငံခြားဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များအပေါ် တရုတ်ပြည်၏ အင်တာနက် ဆင်ဆာလုပ်မှုသည် တရုတ်ပြည်မကြီးမှ အင်တာနက် အသုံးပြုသူများအား တရုတ်ပြည်၏ ကိုယ်ပို်င် အီလက်ထရွန်နစ် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအပေါ် မှီခိုအားထားစေရန် တွန်းအားပေးဖို့ ရည်ရွယ်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အနောက်ဘက်နိုင်ငံများ လူထုဆက်သွယ်ရေး မီဒီယာ သတင်းထောက်များက တင်ပြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ လွှမ်းမိုးခြင်းမှ မိမိတို့၏ စီးပွားရေးကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ကာကွယ် ခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် မေလ ၉ ရက်နေ့တွင် ချိုင်းနားတယ်လီကွန်း၏ ကုမ္ပဏီခွဲ ဖြစ်သော ရှန်ဟိုင်းတယ်လီကွန်းကို မစ္စတာ ယေတိုင်း(冬劲) ကတရားစွဲဆိုလိုက်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ၎င်း၏ ဆိုဒ်များအနက် တစ်ခုကို[ကိုးကားရန်လိုအပ်သည်] တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ကို ပိတ်ဆို့လိုက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် တောင်းဆိုခြင်းနှင့် စာချုပ်စာတမ်းများ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြခြင်း အပါအဝင် ရှေ့သို့ ခြေလှမ်း တသီတတန်းကြီး လှမ်းလိုက်သည်။ သူ၏တရားမကြောင်း စွဲဆိုမှုကို ရှန်ဟိုင်းရှိ ပူဒုန်တရားရုံးက လက်ခံခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကို သူ၏ အွန်လိုင်းဒိုင်ယာရီ (English) တွင် မစ္စတာ ယေတိုင်းက သတင်းပို့ခဲ့သည်။ Digg ပေါ်ရှိ ဆောင်းပါးတစ်ခုမှတဆင့် အွန်လိုင်းလက်မှတ်ဝယ်ခြင်းအတွက် သတင်းတစ်ခုကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
လိင်မှုရေးရာများ ပါသောအကြောင်းအရာများကို အမြင်ကျယ်အောင်လုပ်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
နိုင်ငံရေးနှင့်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ကန့်သတ်ခြင်းများမှာ ပြင်းထန်နေဆဲ ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၀၄ခုနှစ်အစောပိုင်း ကာလမှစတင်ကာ လိင်မှုရေးရာများပါသော ဘလော့ဂ်များ အများအပြား ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ မူဇီမေ(木子美)နှင့် ဇူယင်ကျင်တုံ(竹影青瞳) ဝက်(ဘ်)နာမည်လွဲ တို့ကို သုံးသည့် အမျိုးသမီးများက အွန်လိုင်းဒိုင်ယာရီများတွင် ယင်းတို့၏ လိင်မှုဘဝများအကြောင်း ရေးသားပြီး ထင်ရှားကြော်ကြားသူ အငယ်စားများဖြစ်လာကြသည်။ဤအကြောင်းကို အနှံ့အပြား သတင်းပို့ခဲ့ကြပြီး တရုတ်ပြည်မကြီး၏ သတင်းဆက်သွယ်ရေး မီဒီယာများအကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ ဤဘလောဂ္ဂါများ၏ ဆိုဒ်အများအပြားကို ထိုအချိန်မှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် ပိတ်ဆို့ထားရှိခဲ့သည်။ အနုပညာနှင့်ဆိုင်သော ဝတ်လစ်စားလစ် ဓာတ်ပုံပညာ အခိုက်အတန့်ခေတ်စားခြင်း(ကခြေသည် တန်ဂျာလီကိုယ်တိုင် ထုတ်ဝေသောစာအုပ်အပါအဝင်)နှင့် တရုတ်ပြည်မကြီး၏သတင်းစာ၊မဂ္ဂဇင်းနှင့်ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်အနည်းအကျဉ်းတို့တွင်ပါရှိသော ဖုံးရုံမျှသာဝတ်ဆင်ထားသော အမျိုးသမီးများ၏ ဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် အပေါ်ပိုင်း ဗလာကျင်းဓာတ်ပုံများနှင့် အချိန်တစ်ပြိုင်တည်း ဆိုသလိုဖြစ်ခဲ့သည်။ တရုတ်ဘာသာနှင့်ရော နိုင်ငံခြားဘာသာနှင့်ပါ ချိန်းဆိုခြင်း (dating) နှင့် “အရွယ်ရောက်သူများ စကားပြောခြင်း(adult chat)” ဆိုဒ်အများအပြားကို ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အချို့ဆိုဒ်များကို ဆက်လက်ဝင်ရောက် ရနေဆဲဖြစ်သည်။ သက်ညှာမှုဆိုင်ရာ ပေါ်လစီတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ထက် ယင်းဆိုဒ်များ၏ တည်ရှိမှုကို တရုတ်အာဏာပိုင်များက လျစ်လျူရှုခြင်းက ပိုပုံရသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ရ ရက်နေ့တွင်၊ ပူးတွဲ ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး US ဒေါ်လာ ၂၁ ဘီလီယံကျော် ပိုင်ဆိုင်သော U.S.၊ ဥရောပနှင့် ဩစတြေးလျတို့ရှိ ကုမ္ပဏီ ၂၆ ခုကို ကိုယ်စားပြုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် သုတေသီများ ပါဝင်သော မဟာမိတ်အဖွဲ့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြခွင့်ကို ကာကွယ်ရန် တိုက်တွန်းနေပြီး၊ လူ့အခွင့်အရေးများ ချိုးဖောက်နေသော တရုတ်ပြည်ကဲ့သို့ နိုင်ငံများတွင် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများက စီးပွားရေးမလုပ်ရန် စောင့်ကြည့်ဖို့ကိုလည်း ကတိပြုခဲ့ကြကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် UN၊ OSCE နှင့် OAS တို့၏ လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြခွင့်ဆိုင်ရာ အထူးအမိန့်အာဏာများက အင်တာနက် ကော်ပိုရေးရှင်များအား “အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်သော အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ခုခံတော်လှန်ဖို့ . . လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်” ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ တရုတ်အစိုးရက ငှားရမ်းထားသည်ဟု ကောလဟာလထွက်သော ဟက်ကာများ၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံရသောအခါ Google က တရုတ်ပြည်မှ ထွက်သွားမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ (News Week)
ပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ဖြတ်ထွက်ရာတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုများ[ပြင်ဆင်ရန်]
သတင်းအချက်အလက်များကို တားဆီးရာ၌ ဖိုင်းယားဝေါ(လ်)မှာ အများအားဖြင့် မထိရောက်ပေ။ ထိုထက်တိတိကျကျ ဆိုရလျှင် သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ထားသော အုပ်စုများက ဖိုင်းယားဝေါ(လ်) အပြင်ဘက်ရှိ ပရောက်ဆီဆာဗာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ အသာစီးရအောင် လုပ်နိုင်ပေသည်။VPN နှင့် SSH တို့၏ တရုတ်ပြည်မကြီး၏ ပြင်ပနေရာများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးများကို ပိတ်ဆို့ထားခြင်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် တရုတ် ပြည်မကြီး၏ အပြင်ဘက်ရှိ ၎င်းတို့ ရရှိနိုင်သော ကွန်ပျူတာများနှင့် စိတ်ချရသော ဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းများရှိသော သူများအတွက် တရုတ်ပြည်၏ မဟာ ဖိုင်းယားဝေါ(လ်)အရံအတား ၏ ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု လက္ခဏာများကို အသာစီးရရန်မှာ အသေးအဖွဲမျှသာ ဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ္ဂါနှင့် Wordpress.com တို့ကဲ့သို့ အခမဲ့ ဘလော့ဂ် လက်ခံဟို့(စ်) ဝန်ဆောင်မှုများသည် မကြာခဏ ဆိုသလို ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ကြုံတွေ့ရသောကြောင့်၊ ဘလောဂ္ဂါများနှင် ဝက်(ဘ်)မာစတာ များသည် တရုတ်ပြည်ရှိ ပရိသတ်အတွက် ရည်ရွယ်၍ အခကြေးငွေ ပေးရသည့် အမျိုးမျိုးသော လက်ခံဟို့(စ်) ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ကောင်းကျိုးများကို မကြာခဏ ဆွေးနွေးကြသည်။[ကိုးကားရန်လိုအပ်သည်] အကယ်၍ အာဏာပိုင်များက ပိတ်ဆို့ခဲ့ပါက ဘလော့ဂ် တစ်ခု၏ IP လိပ်စာကို မိနစ် ၃၀အတွင်း ပြောင်းလဲပေးရန် အချို့သော တရုတ်ပြည် အဓိကထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများက ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ကမ်းလှမ်းကြသည်။
ဆီဖုန် (Psiphon) သည် တိုရန်တို တက္ကသိုလ်ရှိ စီတီဇင်လက်(ဘ်) ညွှန်ကြားရေးမှူး ပါမောက္ခ ရော်နယ်(လ်)(ဒ်) ဒီဘတ်(ထ်)၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် ရှိသော စီတီဇင်လက်(ဘ်)( Citizen Lab)မှ တီထွင်ထုတ်လိုက်သော ဆော့(ဖ်)ဝဲ စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဆီဖုန်သည် ယုံကြည်ရသည့် လူမှုရေးကွန်ယက်များမှတဆင့် အလုပ်လုပ်သော ရှောင်ရှားကျော်လွှားသည့် နည်းပညာဖြစ်ပြီး အစိုးရများက တပ်ဆင်အသုံးပြုသော အကြောင်းအရာများကို စစ်ထုတ်သည့် စနစ်များကို ကျော်လွှားရာတွင် အင်တာနက် အသုံးပြုသူများကို ကူညီရန် ရည်ရွယ်သည်။ အခမဲ့နှင့် အသုံးပြုသူများက ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သော အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်း “ဝီကီပီးဒီးယားကဲ့သို့ ဆိုဒ်များနှင့် အခြားသော သတင်းအချက်အလက်နှင့် သတင်း အရင်းအမြစ်များသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ကို လူများအားပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရည်ရွယ်ပါသည်” ဟု ဆီဖုန်၏ အင်ဂျင်နီယာခေါင်းဆောင် မိုက်ကယ်(လ်)ဟား(လ်)က CBC အွန်လိုင်း သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားပါသည်။
Tor website ကို ကို ပိတ်ဆို့ထားသော်လည်း Tor ကွန်ယက်ကိုမူ မပိတ်ဆို့ပါ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦးက ယင်းကို ရယူနိုင်ပါက ဆင်ဆာထိန်းချုပ်မှုများကို အသာစီးရရန်အတွက် Tor ကို ထိရောက်သော လက်နက် ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။[ကိုးကားရန်လိုအပ်သည်] Tor သည် အများပြည်သူ ကွန်ပျူတာ အဝင်စာရင်းကို ပြုစုထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ ဆန္ဒရှိပါက အာဏာပိုင်များသည် ယင်းကို အလွယ်တကူပင် ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ကဏ္ဍ ၆.၄ နှင့် ရ.၉ အရ၊ တရုတ်ပြည် အာဏာပိုင်တို့၏ အချိန်ဇယား စိစစ်ချက်ကြောင့် Tor ထိခိုက်နစ်နာရသည်။ ထို့ကြောင့် အမည်ဝှက်ထားမှုကို ချိုးဖောက်ခြင်းများ ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိအခြေအနေတွင်၊ တန်ပြန် ဂယက်ရိုက်ခြင်းများမှ လွတ်ကင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ အာမခံခြင်း မပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း ဆင်ဆာမလုပ်ထားသော download ဆွဲချခြင်းများနှင့် တင်ခြင်းများကို Tor က ခွင့်ပြုထားသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်မှစ၍ အများပြည်သူတို့ တစ်ဆင့်ပေးပို့ခြင်း ၈၀%ကို IP လိပ်စာနှင့် အဝင် port တို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်။ သို့သော်လည်း Tor အသုံးပြုသူများသည် အများပြည်သူပိုင် မဟုတ်သော တစ်ဆင့်ပေးပို့ခြင်းများ (တံတားများ)မှ တစ်ဆင့် ကွန်ယက်နှင့် ချိတ်ဆက်ဆဲပင် ဖြစ်သည်။ Tor အပြင် အခြားရွေးချယ်စရာ တစ်ခုအဖြစ် HTTP/HTTPS လိုင်းကြောင်း ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုး ရှိသည်။
ယခင်က Google ၏ cache အင်္ဂါရပ် ကို အသုံးပြု၍ ပိတ်ဆို့ထားသော website များကို ကြည့်ရှုခြင်းမှာ သာမန်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် googel ယင်း လက္ခဏာသည် ယခုအခါ သုံးစွဲရာတွင် အားမကိုးလောက်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ပိတ်ဆို့ထားသော website များအတွက် အသုံးမဝင်သောကြောင့်လည်းကောင်း ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ အချို့သော အဆင့်အောက်တွင် ရှိပုံပေါ်သည်။ ယခုလက်ရှိတွင် Firewall အရံအတား၏ အပြင်ဘက်ရှိ proxy server များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းအပေါ် အများအားဖြင့် အသာစီးရနေပါသည်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသူများအတွက် လုပ်ဆောင်ရန်မှာ မခက်ခဲပါချေ။ လူသိများသည့် အချို့သော proxy server များမှာ ပိတ်ဆို့ခံထားရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံက google ကို ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံသား အချို့က google ၏ ကြေးမုံသဖွယ်ဖြစ်သော elgooGကို သုံးခဲ့ကြသည်။elgooG သည် google ၏မပြည့်စုံသော အခြားမူကွဲတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု Firewall operator များက ထင်သောကြောင့် တရုတ်ပြည်၏ မဟာ Firewall အရံအတားကို ရှင်သန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။(ဤသတင်းအချက်အလက်မှာ ခေတ်မမီတော့ချေ။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် Google အား အစောပိုင်း ပိတ်ဆို့ခြင်းအကြောင်း ရည်ညွှန်ခြင်းဖြစ်သည်။)ပိတ်ဆို့ထားသော website များကို လှန်လှောကြည့်ရှုရန် နည်းလမ်းများစွာ (website နှင့် program များ)ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယင်းတို့တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
*Garden and GTunnel by Garden Networks
လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ရှောင်ရှားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
Baidu ဒဏ္ဍာရီသတ္တဝါ ၁၀ကောင်သည် ကနဦးက ဟာသ လှိမ့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း နာမည်ကျော်ကြားလာပြီး အင်တာနက်မင်း(မ်)အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။ သတင်းများ အရ မူလက ဤဆယ်ကွက်သော လှိမ့်ကွက်များမှာ နေရာအနှံ့အပြား တိုးပွားလာလျက်ရှိသော၊ စည်းကမ်း ကြီးလွန်းသော online ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်းကို တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းအပေါ် နိုင်ငံသားများ၏ တော်လှန်ခြင်း၏ သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ နိုင်ငံတော် ရေဒီယို၊ရုပ်ရှင်နှင့် Televison စီမံခန့်ခွဲရေးက အကြမ်းဖက်မှု၊ ညစ်ညမ်း စာပေရုပ်ပုံနှင့် “လူမျိုးစု ခွဲခြားရေးနှင့် လူမှုရေးငြိမ်သက်ခြင်းအား အခြေပျက်စေအောင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်” နိုင်သော အကြောင်းအရာများ အပါအဝင် အကြောင်းအရာ အမျိုးအစား ၃၁ ခုကို ထင်းလင်း မြင်သာအောင် ပြသရန် ညွှန်ကြားလွှာ တစ်စောင်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ “မြက်ရွှံ့မြင်း” နှင့် “မြစ်ဂဏန်း” တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရမှ ကသိကအောက် ဖြစ်ခဲ့ရပြီးနောက် ညွှန်ကြားချက် ထွက်ပေါ်လာသည်ဟု နိုင်ငံသား အများစုက ယုံကြည်ကြသည်။ လှုပ်ရှားမှုမှာ ဇွန်လ ၄ ရက် Tiananmen ရင်ပြင် ကန့်ကွက်ချီတက်ပွဲ၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့ နီးလာ၍ နိုင်ငံရေးအရ အထိမခံသော အကြောင်းအရာများအပေါ် စာပြောင်များ သို့မဟုတ် အခြားသော ဝေဖန်ချက်များ ပျံ့နှံ့နေမှုကို ရပ်တန့်ရန် တီထွင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု လုပ်ငန်း လေ့လာသူများက ယုံကြည်ကြသည်။
Cyberpolice.cn - Ministry of Public Security P.R. China Information & Network Security Archived 15 March 2007 at the Wayback Machine.
Free software to get past the censorship in China Archived 19 April 2011 at the Wayback Machine.
Blogging on report on blogging in China, 16 March 2006
People's Republic of China: State control of the Internet Amnesty International, 27 February 2002
The Chinese Internet Crash of 2007 - Calamity or Capitalism? NewsVine report.
Discussion about the best hosting services for websites and blogs looking to get around the Great Firewall. Archived7May 2012 at the Wayback Machine.
Cherry, Steven (2005). "The Net Effect: As China's Internet getsamuch-needed makeover, will the new network promote freedom or curtail it? Archived 17 October 2007 at the Wayback Machine.". IEEE Spectrum Online (2005).
Collins, Dan (2002). China's Internet Censorship Archived4November 2013 at the Wayback Machine., CBS,3December 2002
Crandall, Zinn, Byrd, Barr, and East (2007). "ConceptDoppler: A Weather Tracker for Internet Censorship". ACM Conference on Computer and Communications Security, Alexandria, VA, USA. To appear in conference proceedings.
Hermida, Alfred (2002). Behind China's internet Red Firewall, BBC,3September 2002
James, Randy (2009). A Brief History of Chinese Internet Censorship Archived 12 November 2010 at the Wayback Machine., TIME, 18 March 2009
Pan, Phillip (2006). The Click That BrokeaGovernment's Grip The Washington Post, 19 February 2006
Qiang, Xiao (2005). The Development and the State Control of the Chinese Internet Archived 27 September 2007 at the Wayback Machine., China Internet Project, The Graduate School of Journalism, University of California at Berkeley, 14 April 2005
Tao, Wenzhao (2001). "Censorship and protest: The regulation of BBS in China People Daily". First Monday, v.6, n.1 (January 2001).
Walton, Greg. (2001). China's Golden Shield Archived 29 September 2007 at the Wayback Machine.. International Centre for Human Rights and Democratic Development.
ViewDNS.info - Chinese Firewall Test - Tests ifawebsite is accessible from within mainland China
Translation of the Filtered Key Words in Chinese Cyberspace Archived 27 September 2007 at the Wayback Machine. 24 June 2005
How to get uncensored internet access in China Archived 24 February 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တရုတ်ပြည်သူ့_သမ္မတနိုင်ငံတွင်_အင်တာနက်_ဆင်ဆာလုပ်ခြင်း&oldid=717957" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။